यी रोगहरुको समस्या छ भने आँप नखानु नै उत्तम - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यी रोगहरुको समस्या छ भने आँप नखानु नै उत्तम - खबर प्रवाह
यी रोगहरुको समस्या छ भने आँप नखानु नै उत्तम
आइतवार, भदौ २८, २०७७
एजेन्सी । गर्मी महिनामा आँप सहज रुपमा पाइन्छ । बच्चादेखि बुढासम्म सबैलाई यो फल मनपर्छ ।
आँप स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मान्निछ । तर,केही यस्ता रोगहरु हुन्छन् जसका कारण आँप खानु उचित मानिदैन । कुन रोग लाग्दा आँप खान हुँदैन भन्ने विषयमा यहाँ जानकारी दिइएको छ-
जो व्यक्तिहरुलाई डायबिटीजको समस्या छ उनीहरुले आँप खानु हुँदैन । आँप धेरै नै गुलियो हुने भएका कारण शरिरमा सुगर लेभल बढ्छ ।
२. पेटको समस्या
आँपमा फाइवरको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले शरिरमा अत्यन्त गर्मी पैदा गर्छ । मानिस जसमा पेटको समस्या छ उनीहरुले पनि आँप खानु हुँदैन ।
जो मानिसहरुको तौल धेरै छ उनीहरुले समेत आँप खानुहुँदैन । यसमा धेरै सुगर र क्यालोरी हुन्छ । यसका कारण झन् तौल बढ्ने गर्छ ।
आँप छिटो पाक्न क्यालसियम कार्वाइडको प्रयोग गरिन्छ । जो मानिसहरुलाई एलर्जीको समस्या छ उनीहरुले आँप खानुहुँदैन ।
५. मुटुको रोगी
यसमा पोटासिशयमको मात्रा ज्यादा हुन्छ । आँप धेरै खाँदा शरिरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने गर्छ । यसले मुटुमा समस्या गर्छ ।
अस्थमा भएका बिरामीहरुले पनि आँप खानु हुँदैन । यसमा एनाकार्डिक एसिड हुन्छ । यसले सास लिन समस्या पैदा गर्छ ।
आँपमा भिटामिन–सी हुन्छ । यसको अधिक सेवनले भिटामिन सीको मात्रा बढ्छ । जसका कारण दाँतमा नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ ।
८. मुखको छाला जाने समस्या
आँपले शरिरमा गर्मी पैदा गर्छ । यसका कारण ओठमा छाला जाने समस्या देखिन्छ ।
यसरी तोडेका थिए भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनको अहंकार !
कब्जियत हुन्छ ? खानुस् काँचो केरा (फाइदासहित)
केपी ओलीको साथ छाड्न कुनै आइतबार पर्खिन पर्दैन : लेखराज भट्ट
केपी ओली चुनाव हार्न पनि सक्छन् : गुरुङ
गृहमन्त्री थापाकाे चिन्ता : अदालतले बिताउँछ कि क्या हाे ?
वैद्यलाई प्रचण्डको सन्देश : ‘हामी एक हुने बेला आएको छ’
ओली समूहमा मार्क्सवाद होइन, मासुभात चल्न थाल्यो : रघुजी पन्त
राष्ट्रपतिको होइन, भूमिकाको विरोध गरेकी हुँ : रामकुमारी झाक्री
यी ७ कुरा जो महिलाले फिटिक्कै खोल्दैनन्
काठमाडौँ । सबै पुरुषले महिलालाई बुझ्न नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरुले एकदमै गोप्य राख्ने केहि कुराहरु हुन्छन् । केही यस्ता कुराहरु छन् जुन महिलाले सधै गोप्य राख्ने गरेको पाइएको छ । १. एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् रिस गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुँदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले […]
सावधान ! जाडो याममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता ८ काम
चिकित्सकहरूका अनुसार जाडो शुरु भएसँगै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण जाडो याममा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । जाडो याममा छाला सम्बन्धी समस्या, स्वास प्रस्वास, हाड जोनी दुख्ने, ढाड दुख्ने, रक्तचाप बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसबाट जोगिन हामीले हाम्रो वानी, व्यवहार, खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जाडो याममा हुने […]
मृगौलाको पत्थरी हुँदा के के नखाने?
–डा. हेमराज कोइराला चितवन । खनिजतत्व र नुन आदिबाट मृगौलामा बनेकोे कठोर डल्लोलाई मृगौलाको पत्थरी भनिन्छ ।हुनत मृगौलाको पत्थरी हुनमा धेरै कारक तत्वहरू जिम्मेबार छन् तर हामीले खाने खानेकुराहरूको भूमिका ती सबै कारक तत्वहरू मध्ये मूख्य मानिएको छ । मृगौलाको पत्थरी हुँदा के खाने वा नखाने भनेर निक्र्यौल गर्नुभन्दा पूर्व हाम्रो शरीरमा बनेको पत्थरी कस्तो […]
जाडोमा प्याजको पात खानुको फाइदा
क्रमस जाडो बढ्दैछ । जाडोसँग कसरी जुध्ने ? न्यानो कपडा, आगो वा हिटर मात्र काफी छैन । कतिपय खानपानको माध्यामबाट पनि चिसो भगाउन सकिन्छ । चिसोबाट जोगिनको लागि खाइने खाद्यपदार्थहरुमा तातो सुप र झोलयुक्त तरकारीहरु हाम्रो रोजाईमा पर्छन् । तातो सुपहरुको सेवन गरेर हामीले आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्छौं । विज्ञापन अझै जाडो महिनामा सुप, […]
काठमाडौं । ओखरलाई ब्रेन फूड अर्थात दिमागको खाना भनिन्छ । किनभने यसमा भिटामिन–ई सहित अन्य धेरै आवश्यक पोषक तत्वहरू पाइन्छ । ओखरले हाम्रो दिमाग फिट राख्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको एक अनुसन्धानका अनुसार ओखर खानाले दिमाग तेज बनाउनुका साथै एकाग्रता पनि बढाउँदछ । विज्ञापन यसले २६ प्रतिशत डिप्रेसनलाई घटाउँन पनि सहयोग गर्दछ । […]
शरीरका यी पीडालाई बेवास्ता नगर्नुस्, भयानक खतरा हुनसक्छ
शरीरमा पीडा हुनुलाई धेरैलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । एकछिन दुखेपनि बिस्तारै सबै ठीक भइहाल्छ भनी उनीहरू टार्ने गर्छन्। १ टाउको दुखेको टाउको फुट्ने गरी दुख्नु, पिठ्युँ र गर्दन दुख्नु अनि चक्कर लाग्नु भनेका एन्युरिजमका लक्षण हुन्। टाउको बेस्सरी दुखेको छ, हातगोडामा कमजोरी महसूस भएको छ र स्मरणशक्ति गुम्दैछ भने ब्रेन स्ट्रोकको लक्षण हो। २ छातीमा […]
समृद्ध भरतपुर महानगरको चर्चा
विगतबाट पाठ सिकौँ, संयमित बनेर परिपक्क निर्णय गरौँ: गोकर्ण विष्ट
राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग
सर्वोच्चको फैसलापछि वामदेवले भने, अब फेरि पार्टी मिलाउँछु
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्‍यो : नेता बर्षमान पुन
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रचण्डले भने : यो नेपाली जनताको जित हो, सबैलाई बधाई
ओलीले हारे मुद्दा, सर्वोच्चले गरिदियो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर
काभ्रेमा ओली समुहका नेतामाथि आक्रमण प्रयास: बास्कोटा आक्रोशित